Varotra volontany vita amin'ny alàlan'ny trano, mpamatsy vola - Mpanamboatra rafitra vita amin'ny alàlan'ny china
Ny rafitra varavarana sliding FOEN J100 dia manome vahaolana feno ho an'ny tranobe; Tapa-telo vita amin'ny fingotra misy kodiarana, ary ny kodiarana vita afovoany dia manome filalaovana tanteraka ny fiasa amin'ny alàlan'ny firakofana amin'ny orana, mba hahazoana vokatra tsara sy rano fatratra ny vokatra.Higher metaly afaka mahatsapa ny fanokafana fety lehibe, mora ahafahana manome fahafaham-po ny fisian'ny fisarahana isan-karazany; Ny famolavolana tsotra ho an'ireo mpankafy endrika ivelany dia mahatonga ny trano ho mora sy tsara tarehy kokoa, natao ho an'ny tetikasa afovoany sy avo lenta.
FOEN Smart Window System 5-FOEN J168 Rohy telo mihetsika
FOEN J168 Ny rafi-baravarana sliding dia manome vahaolana feno ho an'ny fananganana; Tiorina vita amin'ny fingotra telo no nofehezina, ary ny tady vita amin'ny paoty afovoany dia manome filalaovana tanteraka ny fiasa amin'ny alàlan'ny tsipika orana, ka ny vokatra dia manana rivotra madio sy rano fatratra.Higher metaly afaka mahatsapa ny fanokafana fety lehibe, mora ahafahana manome fahafaham-po ny fisian'ny fisarahana isan-karazany; Ny famolavolana tsotra ho an'ireo mpankafy endrika ivelany dia mahatonga ny trano ho mora sy tsara tarehy kokoa, natao ho an'ny tetikasa afovoany sy avo lenta.
Doorwin dia toerana tokony hanolotra ny sanda tsara indrindra amin'ny varavarankely aluminium hazo kalitao. Izahay dia mitady vokatra maharitra, angovo sy tsara tarehy ahafahana miditra amin'ny teti-bola rehetra. Miezaka izahay ny hanome ny traikefa tsara indrindra amin'ny serivisy sy ny ekipa injeniera ho an'ny tetik'asa mahazatra sy ny ekipa mpivarotra talenta izay mamaly haingana ny fanontaniany.
Profil indostrialy tsara indrindra namboarin'ny Aluminum avy any Chine
Profil indostrialy aluminium kalitao ho an'ny rindrina boribory
6063 T5 T Slot Track Profil Extrusion Aluminum Industrial